၁.) Myanmar3 နဲ့ Pyidaungsu ဘာကွာသလဲ
ဒီကိစ္စတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်နေလို့ အတိအကျမသိပါ။ Myanmar3 မှာရှိနေတဲ့ အမှားတစ်ချို့ကို Pyidaungsu မှာ ပြင်ထားပြီး တိုင်းရင်းသား စာလုံးတွေ Pyidaungsu မှာ ပိုစုံလို့ဖြစ်တယ် လို့ပဲ အလွယ် မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဟို ISO နဲ့ပိုကိုက်လို့ ဒီ ISO နဲ့ပိုကိုက်လို့ ဆိုတာကတော့ ရိုးရိုး User မပြောနဲ့ ကျွန်တော်တောင် စိတ်မဝင်စားပါ။
၃.) ဘယ်လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်ရမလဲ
အရင် Myanmar3 ရိုက်နေတဲ့ လက်ကွက်ပဲ ဆက်သုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Windows 8.1 တို့ Windows 10 တို့မှာ တစ်ခါတည်းပါတဲ့ လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ လက်ကွက် ထပ်ထည့်စရာ မလိုပါ။ Windows7ဆိုရင် Windows ကိုသာ Upgrade လုပ်လိုက်ပါ။ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Windows7ပေါ်မှာ Keymagic သုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ် (စမ်းမကြည့်ဖူးပါ၊ မူသဘောအရ မရစရာ မရှိလို့ ရနိုင်တယ်ပြောတာပါ)။
၄.) Pyidaungsu ထည့်ထားတယ် ရိုက်ကြည့်တာ မမှန်ဘူး
ဖွန့်က Pyidaungsu ဖြစ်နေပြီး လက်ကွက်က ဇော်ဂျီလက်ကွက် ဖြစ်နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စက်တစ်လုံးထဲမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ် (Myanmar3 ရော Pyidaungsu ပါ ယူနီကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်) တွဲသုံးတယ် ဆိုတာ ဒီအကြောင်းကို တော်တော် နားလည်တဲ့သူမှ သုံးလို့ရတာပါ။ (လုံးဝ) တွဲမသုံးသင့်ပါ။ တစ်မျိုးပဲ သုံးပါ။ နှစ်မျိုးလုံး ထည့်မိတဲ့နေ့ဟာ တိုင်စပတ်တဲ့နေ့ပဲလို့ မှတ်ထားလိုက်ပါ။
၅.) ကောင်းပြီ၊ တစ်မျိုးပဲ သုံးမယ်။ နောက်တစ်မျိုး လိုအပ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Converter တွေ သုံးပါ။ ဥပမာ - ဇော်ဂျီတစ်မျိုးပဲသုံးရင်၊ ရုံးစာ ယူနီကုဒ် (ပြည်ထောင်စု) နဲ့ တင်ဖို့လိုရင် စာကိုဇော်ဂျီနဲ့ပဲရေး၊ ပြီးတော့မှ Converter နဲ့ဖလှယ်ပြီး Microsoft Word ထဲကိုထည့်၊ ဖွန့်မှန်အောင် ရွေးပေးလိုက်ပါ။ အလားတူပဲ၊ ယူနီကုဒ် (ပြည်ထောင်စု) တစ်မျိုးပဲသုံးရင်၊ ဗိုက်ပါတို့ဘာတို့မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ စာပို့ဖို့လိုရင် Converter နဲ့ ဖလှယ်ပြီးမှ ပို့ပါ။
၆.) အလုပ်တွေကို ရှုပ်နေတာပဲ
နောက်လေးငါးနှစ် ဒီတိုင်းပဲ ဆက်ရှုပ်နေဦးမှာပါ။ စိတ်ညစ်နေလို့ အပိုပါပဲ။ အရှိအတိုင်းသာ လက်ခံပြီး ရင်ဆိုင်လိုက်ပါတော့။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ကိုယ်လို ဘဝတူတွေချည်းပါပဲလို့...